Vatori veNhau Vakasungwa kuChitungwiza Vopihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Chivabvu 09, 2022
Vatori venhau vachiratidzira
Vatori venhau veNewsday Blessed Mhlanga naMuzvare Chengeto Chidi avo vakasungwa neMugovera vamiswa pamberi pedare kuChitungwiza vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa mhirizhonga ndokupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso yekutongwa vachibvakumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuChitungwiza VaMoses Hakata, VaTapiwa Muchineripi vanoti dare rabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba.
VaMuchineripi vanoti mhosva yazopinda mudare ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Vatatu ava vanzi vanofanira kugara pavakanyooresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakupera kwemavhiki maviri egaega nemusi weChishanu.
Muneimwewo nyaya ine chekuita nesarudzo dzema by-electins dzakaitwa neMugovera mutevedzeri webato rinopikusa reCitizen Coalition for Change VaOstals Siziba vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehuwandu kuenda kunovhota ndiyo hondo yavatarisana nayo sezvo hondo yesarudza ichipedzwa nekuvhota kana kusananovhota.
Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa neZimbabwe Election Support Network-ZESN-rinoti vanhu vasingadarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota.
VaSiziba vanoti zvinhu zvichange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurirwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kutyisidzira vanhu. v
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yeChitungwiza VaSiziba vanoti bato reZanu PF rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani
Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZanu-PF VaTafadzwa Mugwadi vati.
Mutauriri webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electral Commission VaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemaby-elections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti handibasa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota.
Gwaro reZESN rinokurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vataurire vatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhnga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva.